राष्ट्रपतिबारे नचाहँदा नचाहँदै पनि एकपटक पुनः बोल्न बाध्य भएको छु । केही समयअघि बोल्दा केही तह र तप्काबाट निकै खप्की खानुपरेको थियो । कतिले प्रतिगामीको आरोप लगाए । कतिले उद्देश्य र आशयलाई बङ्ग्याएर चरित्रमाथि नै आक्षेप लगाउन पनि भ्याए जबकि टिप्पणीमा राष्ट्रपतीय सवारीसाधन तथा यातायातबारे जनगुनासो प्रस्तुत गर्दै त्यसप्रति उनको ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएको थियो ।
यति भए पनि केही छैन । कसले के भने त्यो उनीहरूको कुरा हो । जसमा जे छ, त्यही नै देखिने हो । सञ्चारकर्मीको अन्तस्करणले देखेको कुरा बोल्न हिचकिचाउन हुन्न भन्यो र सानो टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछु । आशा छ, यसतर्फ राष्ट्रपति महोदयाको ध्यानाकर्षण हुनेछ ।
हालै महामहिम राष्ट्रपतिले चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा भनेकी छन् – ‘नेपाली भाषा र हिन्दूधर्ममा संस्कृत भाषाको विशेष स्थान छ ।’ उनको आशय नराम्रो थिएन । संस्कृत भाषाको उत्थान हुनुपर्छ भनेर नै त्यसो भनेकी थिइन् तर उनको लिखित मन्तव्यमा आएका शब्द भने आश्चर्यजनक मात्र थिएनन् दयालाग्दा पनि थिए । दुनियाँलाई थाहा छ, संस्कृत भाषाको प्रभाव नेपाली भाषा र हिन्दूधर्ममा मात्र छैन । यसको प्रभाव विश्वव्यापी छ । नेपालीलगायत समग्र भारोपेली भाषापरिवार संस्कृतद्वारा आप्लावित छ । यसबाहेक भोट, बर्मेली आदि अभारोपेली भाषामा समेत संस्कृत शब्दको बाक्लै उपस्थिति भेटिन्छ ।
आश्चर्य त के भने सरकारी सञ्चारमाध्यमले समेत जस्ताको तस्तै प्रचार, प्रसार गरी उनीप्रति हनुमानभक्ति देखाए । उनीहरूले चाहेका भए यसमा संशोधन गर्न वा सुधार्न सक्थे तर चाहेनन् । राणाकाल र शाहकालमा यस्तो हुन्थ्यो ।
हालै अमेरिकी अन्तरिक्ष अन्वेषण संस्था नासा प्रमुखले संस्कृत भाषा सिक्न थालेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । समाचारअनुसार, संस्कृत भाषाको प्रभाव अन्तरिक्षमा समेत उत्तिकै देखिएकाले यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् रे उनी । यसको अर्थ हो, संस्कृत भाषा भूगोलमा मात्र नभई अन्तरिक्षमा समेत सराबर हुन पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति जस्तो मानिस कसरी चिप्लिइन् ? केही समयअघि भेनेजुएला प्रकरणमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको जिभ्रो चिप्लेको थियो, प्रधानमन्त्रीले भनेका । यहाँ त राष्ट्रपति आफैं चिप्लिन पुगिन् । यसले उनको मात्र होइन, उनको सल्लाहकार र सचिवालयको समेत हैसियत प्रस्ट पारेको छ । हो, नजान्नु अपराध होइन । यो आफैंमा त्यति ठूलो कुरा पनि होइन तर नजानेको कुरो बोल्न तम्सनु चाहिँ ठूलै कुरा हो । थाहा नभएको कुरो नबोलेको भए कसको के जान्थ्यो र ? पक्कै कसैले किन नबोलेको भन्ने थिएनन् ।
आश्चर्य त के भने सरकारी सञ्चारमाध्यमले समेत जस्ताको तस्तै प्रचार, प्रसार गरी उनीप्रति हनुमानभक्ति देखाए । उनीहरूले चाहेका भए यसमा संशोधन गर्न वा सुधार्न सक्थे तर चाहेनन् । राणाकाल र शाहकालमा यस्तो हुन्थ्यो । राजा महाराजाहरूले बोलेका कुरा जस्ताको तस्तै प्रचारमा आउँथे । संशोधनको आँट कसैले गर्दैनथिए । कदाचित् कसैले गरे ठूलै आपत आइलाग्थ्यो तर हाल नदीनालामा धेरै पानी बगिसकेको छ । मुलुक प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा पुगेको छ तर हाम्रा सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूलाई भने अहिले पनि त्यसको भूतले छाडेको छैन । यसैमा शासक शासित दुवैथरी मख्ख छन् । एकथरी हनुमान नचाउन पाएकोमा मख्ख, अर्कोथरी हनुमान बन्न पाएकोमा मख्ख तर नतिजा भने बाँदरभक्ति बाहेक केही हुन सकिरहेको छैन ।
महामहिम राष्ट्रपतिले ध्यान दिनुपर्ने यस्ता कुरा धेरै छन् । तिनमा एकाध थप उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु । महामहिमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् । यो राम्रो कुरा हो । उपल्लो तहबाट भएको चिन्ताले पक्कै केही अर्थ राख्छ तर बत्तीमुनि अँध्यारो कायमै रहनु भने राम्रो होइन । उनले नवीन प्रविधि र परिवर्तित प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको कुरा गरेकी छन् तर अतिविशिष्ट र विशिष्टका साथै पूर्वविशिष्टका नाममा हुने गरेको असामान्य सवारीसाधन एवं इन्धन सुविधा प्रयोग प्रकरण चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचारमा पर्छ कि पर्दैन बोल्न आवश्यक ठानेकी छैनन् । उनलाई लागेको होला झिनामसिना कुरामा अल्झिनु हुन्न, राष्ट्रपतिको गरिमा घट्छ तर कुरो त्यसो होइन । गरिमा उठाउने भनेकै झिनामसिना काम र कुराले हो, बढप्पनले होइन ।
महामहिमको साह्रै बिझाउने अर्को पनि एउटा बानी छ । उनी कतै जानुपर्दा राजा महाराजाको शैलीमा एउटा हात उठाएर अभिवादन फर्काउने गर्छिन् । यसलाई उनका हनुमानहरूले राम्रै मानेका होलान् । शायद सिकाएका पनि छन् कि ? तर सर्वसाधारण जनताले भने कत्ति मन पराएका छैनन् । यस्तो काम कि विशिष्टतम योगी, संन्यासी वा सन्त, महन्तहरूलाई सुहाउँछ । कि राजामहाराजाहरूले रैतीलाई अभिवादन फकाउँदा गर्छन् । तर उनी यी दुवैमा पर्दिनन् । उनी गरीब किसानकी छोरी हुन् अनि समाजसुधारक सर्वहारा नेताकी धर्मपत्नी । उनले कहाँबाट सिकिन् वा कसले सिकायो त्यस्तो काम ? यस्तो राम्रो होइन भन्ने उनी आफंैले जान्नुपर्ने हो । नभए सल्लाहकार वा सचिवालयले पनि सिकाउनुपर्ने हो ।
उनी कतै जानुपर्दा राजा महाराजाको शैलीमा एउटा हात उठाएर अभिवादन फर्काउने गर्छिन् । यसलाई उनका हनुमानहरूले राम्रै मानेका होलान् । शायद सिकाएका पनि छन् कि ? तर सर्वसाधारण जनताले भने कत्ति मन पराएका छैनन् ।
जब उनी बिदाको बेला एउटा हात उठाउँछिन् केही मुट्ठीभर बाहेक अरू सबै रिसले चुर हुन्छन् । कति त गालीगलौजमै उत्रिन्छन् । त्यस्तै व्यवहार सहन नसकेर जनताले राजामहाराजालाई बिदाइ गरेका हुन् तर पात्र मात्र फेरियो प्रवृत्ति भने अहिले पनि उही छ भने जनआक्रोश बढ्नु के नै ठूलो कुरा भयो र ? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जनताकी छोरी हुन्, जननेताकी पत्नी । उनलाई त्यस्तो व्यवहार पटक्कै सुहाउँदैन, सुहाएको छैन । जनताले जस्तै दुई हात जोडेर पनि अभिवादन फर्काउन सकिन्छ । यो विशुद्ध नेपाली संस्कृति हो । यसो गरे के फरक पर्छ र ? के यसबाट उनको उचाइ घट्छ र ? अहँ, त्यस्तो लाग्दैन । बरू जनता खुशी हुन्छन्, जय मनाउँछन् । अहिलेलाई यति नै, बाँकी अर्को बसाइमा ।